पूर्वगृहमन्त्रीका गार्डको संक्रमण स्रोत भेटिएन, सशस्त्रका दुई संक्रमित बने धन्यवादका पात्र ! – Mero UK
पूर्वगृहमन्त्रीका गार्डको संक्रमण स्रोत भेटिएन, सशस्त्रका दुई संक्रमित बने धन्यवादका पात्र !
१ जेठ, काठमाडौं । लकडाउनको समयमा प्रशासनले जारी गरेको पास बोकेर उपत्यका छिरेका तीन जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । तीमध्ये दुई जना चन्द्रागिरि नगरपालिकाका छन् भने अर्की महिला (२५) भक्तपुरकी हुन् ।
त्यसैले सर्वसाधारणको व्यापक रुपमा परीक्षण थालिनुपर्ने जनस्वास्थ्यविद्हरु बताउँछन् । उनको कन्ट्याक ट्रेसिङमा संलग्नहरुले भने उनी बसेको घरबाटै संक्रमण फैलिएको हुनसक्ने शंका गरेका छन् ।
काठमाडौंका दुवै संक्रमित सशस्त्र प्रहरीसँग जोडिएका व्यक्ति हुन् । एक जना संक्रमित महिला अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी जवान हुन् । उनका श्रीमान सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा कार्यरत छन् । अर्का संक्रमित पुरुष पनि सशस्त्र प्रहरीकै जवान हुन् ।
सात स्वाबको नतिजाबाट स्रोत खुल्ने आश
दुवाकोटका सशस्त्र प्रहरी जवानमा संक्रमण देखिएलगत्तै महानगरीय प्रहरी परिसर,
पौडेललाई उपभासमुख बन्न नेकपा प्रस्ताव, राष्ट्रिय जनमोर्चाद्वारा अस्वीकार